I-China Office noma ibhokisi lokugcina iphepha elinamandla amakhulu lingasongwa Umkhiqizi Nomhlinzeki | I-Huaguang
Ibhokisi lokugcina iphepha lasehhovisi noma lasekhaya elinamandla amakhulu lingasongwa
Usayizi: 36cm * 28.5cm * 17cm
Ibhokisi eliphethe into, okungukuthi i-thing (abaningi bakhomba i-athikili encane, lifana nokuthi: okubhaliwe kwehhovisi, izimonyo, idatha yefayela, ithuluzi elincane, amasokisi, izikhindi zangaphansi njll.) Ukuqoqa ndawonye, ​​njengoba negama lisho ukuthi isitoreji sokubiza ibhokisi.
Amabhokisi wesitoreji, aziwa nangokuthi amabhokisi ezinto zasendulo, abesetshenziswa amaqembu amaqembu emivubukulo ezinsukwini zokuqala ukugcina izingcezu ezivunjiwe nezihleliwe zezinto ezingamasiko. Lawa mabhokisi ngokuvamile anezinombolo eziqinile, amanye makhulu futhi amanye amancane, kepha iningi lingusayizi webhokisi lezicathulo (izinto zakudala ezivundluliwe zivame ukuba nzima, futhi usayizi webhokisi lezicathulo ulungele ukuphatha). Emphakathini wanamuhla, amabhokisi okugcina aguquke kancane kancane abe "amabhokisi ahlukahlukene", asetshenziselwa ukubamba izinto. Amabhokisi wesitoreji emakethe abe ajwayelekile kakhulu, izindleko zawo eziphansi, inzuzo enkulu, ilungele umphakathi ukuthi uwasebenzise, ​​ngakho-ke kunemikhiqizo eminingi yamabhokisi okugcina emakethe.
Okushiwo ukuthi ukugcina kudlula isikhala sokusetshenziswa esikahle, okungukuthi, ukufeza inhloso yokuthi isikhala esisebenzisekayo nesisebenzayo Ibhokisi lethu lesitoreji, naphezu kosayizi waso, empeleni lingagoqwa, okusindisa izindleko eziningi zokuthumela.Lokhu kunciphise kakhulu izindleko zokuthenga . Izinto zokwenziwa kwephepha zingaphinde zenziwe kabusha ngemuva kokusetshenziswa, nazo ezihlangabezana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo.Futhi isebenzisa izikulufu, ngakho-ke kulula kakhulu futhi kuyashesha ukuhlangana, akudingeki ukhathazeke ngokuyithenga nokungakwazi ukuyihlanganisa. Ngokuvamile isethi yenhlanganisela engu-2, efakwe kabusha ngefilimu enciphayo, intengo ibiza kakhulu. Leli bhokisi lesitoreji linombala oqinile, lilungele ukugcinwa kwemibhalo emahhovisi, kodwa futhi lilungele ukugcina ifenisha yezicathulo nezingubo.Ungathenga isethi eyodwa, eyodwa yehhovisi lakho nenye yekhaya lakho. Gcina ihhovisi lakho nekhaya lihle futhi lihlelekile. Akusekho ukwesaba izinto ezingekho emthethweni ezingakutholi.
Umphetho wephakethe lensimbi
Umphetho wepakethe wensimbi, uzinze futhi uhlala isikhathi eside.Faka ehhovisi ubonakale uhlala phansi.Awuzukuhudula ihhovisi.
Usayizi ka-36cm * 28.5cm * 17cm unamandla amakhulu futhi ungabamba izinto eziningi.
Qaphela izinto ephepheni ukuze uhlunge futhi useshe kalula.
Langaphambilini I-logo yangokwezifiso eyenziwe ngokwezifiso ye-Luxury Paper Jewellery Box Organiser enebhokisi le-Mirror Drawer Ring Earring Jewellery
Olandelayo: Umagazini iqoqo lekhwalithi eliphakeme elenziwe ngokwezifiso eliphakeme
Ibhokisi Lesipho Losuku Lokuzalwa
Ibhokisi Lesipho Elikhulu
ukuvala ibhokisi likashukela eligcinekile lasekhaya ...